सबै Miners लागत कमी Bitcoin बच्नेछन् - Blockchain समाचार
सबै Miners लागत कमी Bitcoin बच्नेछन्
कि खानी फेरि लाभदायक हुन्छ त कति लागत Bitcoin गर्नुपर्छ?
एक 70% डिसेम्बर बीचबाट Bitcoin को मूल्य मा ड्रप व्यावहारिक खानी को लाभकारी कम. आजको मूल्य स्तर संग, गिरने को एक न्यूनतम गर्न $ 6,048, केवल सबै भन्दा ठूलो Miners afloat रहन सक्छ. तर ब्लूमबर्ग को विश्लेषण पनि प्रमुख खेलाडीहरू बीच सबै बच्न सक्नुहुन्छ छैन भनेर देखाउँछ.
आज, 67% को खानी-ऊर्जा चार पूल को हातमा मा केंद्रित छ: BTC.com, AntPool, SlushPool र BTC.top. तर ब्लूमबर्ग विश्लेषक टिम Kulpan asserts: “तपाईं थोक मूल्यहरु मा खरिद तेज खानी प्रतिष्ठानहरु प्रबन्धन कि कम्पनी छैनन् भने, त्यसपछि सम्भवत तपाईँले पैसा गुमाउने छन्।” डिसेम्बर गरेको वृद्धि गरेर खानी बजार वृद्धि 40%, जो सिस्टम को एक असंतुलन गर्न नेतृत्व: Blockchain.info अनुसार, थियो 51% ब्लक निकाल्न कठिन.
गणना को जटिलता र खपत ऊर्जा मात्रा दुवै हुर्किसकेका छ. Bitcoin को औसत सार्दा एक 50-दिन रोकियो भने $ 13,200, त्यसपछि ह्याशहरू को वर्तमान जटिलता र नम्बर, राम्रो उपकरण संग औसत खान प्राप्त हुनेछ $ 80 प्रति हप्ता (तर पुरानो उपकरण, तल्लो को लाभ). तथापि, पनि सबैभन्दा उन्नत Bitcoin-खानी प्रतिष्ठानहरु गुमेको धन को जोखिम विरुद्ध सुरक्षा छैन, जब मूल्य घटेको जोडले, र खान नेटवर्क मा रहन्छ: को Miners को मूल्य बिन्दुमा सुरु घाटा ग्रस्त $ 6,800.
यदि मूल्य उदाउँदैन, त्यसपछि औसत खान गुमाउनु हुनेछ $3प्रति हप्ता. खानी पूल, यस्तो AntPool रूपमा, सकारात्मक क्षेत्रमा रहन सक्छौं, तर आफ्नो लाभ हुनेछ 90% एक 50-दिन सार्दा औसत भन्दा कम $ 13,200.
टिम Kulpan मात्र modeled, आफ्नो राय मा, स्थिति, जसमा खनन फेरि लाभदायक हुनेछ: प्रतियोगिता कम गर्न खेल बाट Miners को एक भाग को अनिवार्य जारी संग Bitcoin वृद्धि. को विश्लेषक निश्चित छ कि सबै आजको सहभागीहरू घाटा बच्न सक्ने छैनन्: या त कसैले मुक्त हुनेछ “को खानी जहाज” यसको वजन देखि, वा सबैलाई डुबा हुनेछ.
तपाईं खानी Bitcoin र अरूलाई Cryptocurrency निजी व्यक्ति हुन् र चाहनुहुन्छ भने, यो क्लाउड खनन मार्फत यो गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, विशेषज्ञहरु पैसा तिर्न र ठूलो कम्पनीहरु प्राप्त गर्ने लाभ आनन्द. यहाँ शीर्ष छन्3क्लाउड खनन लागि कम्पनीहरु: Hashflare, IQMining वा उत्पत्ति खनन
Bitcoin surpasses जाओ ...
Binance & LCX करोड ...
Bitcoinब्लक श्रृंखलाक्लाउड खानीखानखानीसमाचार
अघिल्लो पोस्ट:मात्र चार गुप्त आदानप्रदान दक्षिण कोरियाली नियामक को आवश्यकताहरु पालन
अर्को पोस्ट:नयाँ प्रविधिहरू Bitcoin गरेको scalability समाधान गर्न आउँदैछन्